Gbaa ịnyịnya Koowheel Electric skateboard na-aga n'ebe ọ bụla - Jomo Technology Co., Ltd
Gbaa ịnyịnya Koowheel Electric skateboard na-aga ebe ọ bụla
Na a oge a na ngwa ngwa nke ndụ, n'ihi na ọtụtụ ndị na-acha ọcha na olu akwa, n'èzí-eme bụ ezi obi ụtọ na izu ụka. A-abịa a Ajụjụ: Olee otú ha ga-esi na-kwetara ọnọdụ? KOOWHEEL Electric skateboard ga-abụ ihe magburu onwe oke maka ndị fashionable-eto eto ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ. Ọ na-pụtara na ha na-adịghị na-ata ahụhụ site na mgbochi okporo ụzọ site na-ewere obodo ụgbọ ala, ọbụna n'ebe dị anya site na ahụ mmadụ jupụtara na ụzọ ụgbọ oloko. ndị na-eto eto asị na. Ọ bụrụ na ị họrọ a skateboard skuuta, ị pụrụ ịnụ ụtọ gị dị ebube ná ngwụsị izu na-eme ihe i nwere mmasị na. Dị otú ahụ dị ka ịrị, Play badminton ọbụna Buru strawberries. Ọ bụghị naanị na obi ụtọ izu ụka ma enwekwukwa mmekọrịta na enyi. Ya mere, Gbaa ịnyịnya Koowheel Electric skateboard ga-abụ ezigbo nhọrọ. Gịnị mere ị ga-ahọrọ Koowheel E-skateboard ?
Firstly, ọ bụ ihe kasị oké ọnụ electric skateboard na mfe replaceable batrị mkpọ. Ọ nanị e na brushless, sọrọ na-wheel ehiwe Motors,Bluetooth wireless ime akara na 7 n'ígwé nke inogide Canadian maple maka ime mgbanwe. Ya ọsọ kacha bụ 40km / h na-enwe nnwere onwe na-aga ebe ọ bụla n'obodo ị na-ahọrọ na-enweghị guzzling gas ma ọ bụ ọsụsọ na-agba niile na-eje ije ma ọ bụ biking. Ị ọbụna nwere ike na-etinye ya na akpa na-ebu ya na ebe ọ bụla, ka naanị n'èzí-eme ma ọ bụ na a na kọfị ụlọ.
The Koowheel electric skateboard e kere na mfe echiche na onye ọ bụla ga-enwe ike na-enwe na mma na technology emepụta. Anyị na-adịghị na-eche na electric skateboard bụ nnọọ a toy ole na ole geeks. N'ọdịnihu, ọ ga-abụ a ohuru ụdị njem. Ọ bụ onye ike na-azọpụta ụgbọala. N'ezie a ọhụrụ oke maka obere okwu n'ụzọ na-aga klas, na ụlọ ahịa na-na na na-aga shopping? Gịnị nwere ike ịbụ ihe ebube karịa inwe ike njem kpam gburugburu obodo? Ọ dị mfe na-agba ịnyịnya ka a mgbe nile skateboard. Iji ime akara niile i nwere ime bụ na-ebili na osisi na-enwe na-agba ịnyịnya.